Ghana ɛyɛ Ɔman wɔ Abibiman mu. Kane no na yɛfrɛ ɔman no sɛ "Gold Coast" a ɛyɛ Sika Mpoano. N'ahenkuro din ne Nkran (Accra). Ghanafoɔ dodoɔ bɛyɛ sɛ ɔpepepe adusa ne akyire (over 30 million). Ghana yɛ Ɔman a ɛnyaa fahodie kane wɔ Abibiman mu nyinaa wɔ Ɔbɛnem bosome da ɛtɔ so nsia, afe apem ahankron aduonu-nson mu (Ɔbɛnem 6, 1957). Ɔmanpanin a ɔdii ɔman no anim maa yɛnyaa fahodie no ne Osagyefoɔ Dɔkota Okunini Kwame Nkrumah.
Nkuro akɛseɛ no bi ne Kumasi, Oguaa (Cape Coast), Koforidua, Tema, Tamale, Sekondi (Sekune) Takorade. Kumasi yɛ Asantefoɔ ahenkuro. Asantehene, Otumfoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu (II) ɛne ɔhempɔn a seesei ɔte Sikadwa Kofí (The Golden Stool) so. Na Ghana wɔ mantam bɛyɛ du, nanso seesei deɛ ɛyɛ dunsia.
Ɔmanpanin a ɔdi Ghana so seesei no din de Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo. Ghanafoɔ pɛ asomdwoe na wɔsane nsọ yɛ nkurofɔ a wɔsuro Nyame. Ghana yɛ ɔman a ɛwɔ sika, ɛne nneɛma pa a ɔnya firi n'asase no mu. Ghanafoɔ̯ ani abue. Seesei Ghana asuapɔn (university) nso adɔɔso. Ebi ne KNUST, LEGON, UCC, UEW, UDS, UMAT ɛne deɛ ɛkeka ho.
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaana&oldid=22466"